उडीरहेको प्लेनबाट हामफ्याल्दा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले गुमायो एक छात्रा !
एजेन्सी । अफ्रिकी मुलुक मडागास्कार भ्रमणका क्रममा रहेकी क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीकी एक छात्रा आफ्नै दुर्नियतका कारण मृत्युको शिकार भएकी छिन् । बकिङघमसायरकी अलाना कटल्याण्ड(Alana Cutland ) नाम गरेकी छात्...
अमेरिकामा भिषण गोलिबारी, २० जनाको मृत्यु
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्य-दक्षिणमा अवस्थित टेक्सस राज्यमा रहेको एक शपिङ मलमा गोलिबारी हुँदा २० मानिसको मृत्यु भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार गोलीबारीका कारण कम्तीमा पनि २२ घाइते भएका...
हुथी विद्रोहीद्वारा सैनिक परेडमाथि आक्रमण, ३२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । यमनमा हुथी विद्रोहीले एक सैनिक परेडमाथि गरेको आक्रमणमा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । हुथी विद्रोहीले चलाएको टेलिभिजन च्यानलले दक्षिणी तटीय सहर एडनमा भइरहेको परेडलाई लक्षित गरेर क्षेप्यास्त्र र एउ...
उत्तर कोरियाले रोकिने नाम लिएन, शुक्रबार बिहान पनि गर्यो क्षेप्यास्त्र परिक्षण
एजेन्सी । उत्तर कोरीयाले शुक्रबार बिहान पनि दुई पटक छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। आज(शुक्रबार)बिहान देशको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा परीक्षण गरिएका ...
पाँचतले भवन नदिमा हिड्दै !
एजेन्सी । सोसल मिडियामा हरेक दिन अपत्यारिला भिडियोहरु अपलोड भइरहेका हुन्छन । यस्ता भिडियो देख्दा लाग्छ के यो सम्भव छ ? यस्तैमा ट्वीटरमा एक भिडियो भाइरल भएको छ । नदिमा हिड्दै गरेको पाँचतले विल्डिङ सोस...
एउटा यस्तो ग्रह जसलाई तीनवटा सुर्यले एकैसमयमा परिक्रमा गर्छन् !
एजेन्सी । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले आफ्नो अत्याधुनिक ‘एक्जोप्लानेट–हन्टिङ स्पेस टेलिस्कोप’ टेसमार्फत निकै टाढाको रहेको ग्रह पत्ता लगाएको छ । नासाले जनाएअनुसार उक्त ग्रहलाई तीनवटा सूर्यले एकै...